हङकङमा चिनियाँहरुका फेसबुक र ट्वीटर एकाउन्ट बन्द
काठमाडौं, ३ भदाै । हङकङमा ११ हप्तादेखि जारी सरकार विरोधी आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ । आन्दोलनबारे गलत सूचना प्रवाह गरेको आशंकामा फेसबुक र ट्वीटरले चिनियाँहरुका सयौं अकाउण्ट बन्द गरिदिएको छ । आन्दोलनकारीलाई भ्रममा पार्न चीन...
काठमाडौं, ३२ साउन । हाम्रो दैनिक जीवनमा हजारौं व्यवहारहरुको सामना हामीले गर्नुपर्छ । सामाजिक प्राणी भएपछि हामीले धेरै व्यवहारहरु मानिससँग नै गर्ने गर्दछौ। त्यस्ता व्यवहारहरु केही त सीधा अभिव्यक्त हुने खालका हुन्छन् भने केही उनीहरुको...
मानिसजस्तै रोबोट १ मानव अस्तित्वमाथि खतरा
काठमाडौं, १४ साउन । पछिल्ला केही समय मानिसजस्तै रोबोट बनाउने ट्रेन्ड बसेको छ । के मानिसजस्तै मेसिनको निर्माण डर लाग्दो काम होइन ? यो भविष्यका निम्ति एउटा खतरा होइन ? यस्तो आविष्कार स्वयम्मा मानव अस्तित्वमाथि...
जसलाई फेसबुकले दिएन जागिर, उनैले फेसबुकलाई बेचे १९ अर्ब डलरको कम्पनी
काठमाडौं, ४ साउन । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम र वाट्सएप फेसबुकको स्वामित्वम रहेका कम्पनी हुन् । इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपलाई २३ अर्ब डलर दिएर फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गले केविन सिस्ट्राम र ब्रायन एक्टनसँग खरीद गरेका थिए ।...
बीबीसी । अधिकांश मानिसहरुका लागि स्मार्ट फोन संसार नियाल्ने झ्याल बनेको छ । तर, यही झ्याल तपाईंको निजी जिन्दगी नियाल्ले माध्यम बन्दा कस्तो असर पर्ला रु के तपाईंले यो तथ्यमाथि गहिरिएर मनन् गर्नुभएको छ, कि...
फेसबुकलाई जानकारी दिएबापत् पैसा पाइने एप आउँदै
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफूलाई केही विशेष जानकारी दिने प्रयोगकर्तालाई पैसा दिने नयाँ एप ल्याउने भएको छ। स्टडी नाम दिइएको उक्त एप एन्ड्रोइडमा उपलब्ध हुनेछ। स्टडी एपले प्रयोगकर्ता कुन कुन एप्लिकेसन, कुन देशबाट कति समयसम्म प्रयोग...